“လတ်တလော ခေတ်စားနေ တဲ့ လိမ်နည်း (၂) မျိုး” အထူးသတိထားကြပါ – Zartiman
“လတ်တလော ခေတ်စားနေ တဲ့ လိမ်နည်း (၂) မျိုး” အထူးသတိထားကြပါ
ပြောရရင် အခုဖော်ပြမယ့် လူလိမ် မျိုး နဲ့ ကိုယ်ကြုံလာရင် ဖော်ထုတ် ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဖော်ထုတ်တဲ့ နေရာမှာတော့ သတိ ကြီးကြီး ဉာဏ်ကြီး ကြီး ထားဖို့လိုပါတယ်.. (ကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့ ၊ သူအရှက်ကွဲစေဖို့ ဦးမတည် သင့်ပါဘူး..) မဟုတ်ရင်တော့ မေတ္တာ စေ တနာကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ခံစားသက်ဝင်တဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ အမှန်တရားရဲ့ သူရဲကောင်းလုပ်ချင်တဲ့ ခင်ဗျားဟာ အားလုံးရဲ့အမြင်မယ် လူဆိုး တစ် ယောက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့က ဖြူးကို ကိစ္စလေး ရှိလို့ အမြန်လမ်း ကနေ အသွား ဘုန်းဘုန်း တစ်ပါး နေပူကြီးထဲ လမ်းဘေးမှာ ကားစောင့်နေတာ တွေ့လို့ ကားရပ်ပေးလိုက်တယ်.. (ကားက ကျွန်တော့်အသင်းက Ambulance ကားပါ..)“ဘုန်းဘုန်း…ကားစောင့်နေတာလား..” ဆိုတော့ ကား ကို တစ်ချက် ကြည့်ပြီး အိုးတို့ အန်းတမ်းနဲ့ ဟုတ်တယ်တဲ့.. “ဘယ်ကြွ မလို့လဲ ဘုရား..” “ဒကာလေးက ဘယ်သွားမှာလဲ..” “ဖြူး..ကိုသွားမလို့ ဘုရား..” “ဥူးဇင်းက တောင်ငူကြွမှာ.. သွားသွား..ဒကာလေး..” “ရတယ်ဘုရား..တပည့်တော်က ဖြူးမှာ ခဏရယ်..။
တောင်ငူ ချက်ခြင်းသွားမှာ.. လိုက်ခဲ့..” (အမှန်က တောင်ငူသွားစရာအကြောင်းမရှိပါ.. တမင် ပြောတာ..) “သွားပါ..ဒကာလေး.. ရတယ်.. ရတယ်. မလိုက်ဘူး.. .” ဆိုပြီး အနားကနေ ချာခနဲ ထွက်သွားတယ်.နေထိုင်ရာ ဖဒိုမြို့က အမြန်လမ်းဘေးမှာ ရှိနေတာကတစ်ကြောင်း အမြန်လမ်းကို ဖန်တစ်ရာတေအောင် Ambulance အသုံးပြုရတာကတစ်ကြောင်း လမ်းဘေးမှာ မကြာခဏကားတားစီးတဲ့ ရဟန်း သံဃာများနဲ့ ဆုံရတတ်ပါတယ်.. တွေ့တိုင်း ကျွန်တော်လမ်းကြုံ တင်တယ်.. ။
ရိုးရိုးသားသား လမ်းကြုံလိုက်ချင်တဲ့ ရဟန်း သံဃာတွေဆို ချက်ခြင်းလိုက်ပါတယ်.. သွားလိုတဲ့ မိုင်တိုင်ကိုပြောပြီး ကားပေါ်မှာ အေးချမ်း စွာ သီတင်းသုံး လိုက်လာတတ်တယ်..ဆန်းဆန်းပြားပြား ကိုယ်တော်တွေဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် Ambulance ကို မစီးပါ.. သူတို့က အိမ် စီးကားမှ စီးပါတယ်.. ပြီးရင်တော့ ကားပေါ်ရောက်ရင် အလာပ သလာပ ပြောပါလိမ့်မယ်.. ကားမောင်းတဲ့သူက “အရှင်ဘုရား ဘယ်က ကြွ လာတာလဲ ” လို့ မေးတဲ့အခါ.. သာသနာအတွက် အင်မတန်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ အားထုတ်နေရတဲ့။သူ့ဘဝအကြောင်းနဲ့ သူဆေးကုဖို့။
သို့မဟုတ်။သူ့ဝါး ဓနိ ကျောင်းလေး မိုးယိုနေတာ ပြုပြင်ပေးမယ့်သူမရှိလို့ ရွာမှာရှိနေတဲ့ အမျိုးတွေဆီလာပြီး ငွေလေး ၅သောင်း လောက် ချေးငှါးတာ အဆင်မပြေခဲ့တဲ့အကြောင်း …. ဇာတ်နာစွာ ပြန်ပြောပြပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီအခါ ကားမောင်းသူက သဒ္ဒါပေါက်ပြီး လမ်းကြုံဒါန အနေနဲ့ လှူပါလိမ့်မယ်.. (ကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိုင်သူလေ..) (လိုအပ်နေတဲ့ ငွေကလည်း ၅သောင်း ထဲလေ..)အမြန်လမ်းနားမှာနေတဲ့ ကျွန် တော်တို့အတွက် ဖန်တရာတေ ရိုးနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေမယ့် လူတွေ ခုချိန်ထိ အလိမ်ခံနေရဆဲ.. တစ်ခါတစ်လေ ။
အဲ့လို လှူလိုက်တဲ့အကြောင်း ဖေ့ဘွတ် ပေါ်မှာပုံလေးတွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့အခါ မချိပြုံးပဲ ပြုံးမိတော့တယ်.. အဲဒီလို လူလိမ်ကိုယ်တော်တွေ အ မြန်လမ်းဘေးမှာ များလာတော့ တကယ့် ကို ကားကြုံလိုက်ချင်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေအတွက် ခက်ခဲသွားတယ်.. ဒီအကြောင်းသိတဲ့ ကား တွေကလည်း လူကြုံ မတင်ရဲတော့ဘူး.. ဒီလို လိမ်နည်းမျိုးကို “မေတ္တာ စေတနာကို နင်းပြီး လိမ်နည်း” လို့ ခေါ်ပါတယ်..လောကမှာ လူ လိမ်တွေ အသုံးပြုတဲ့ အခြေခံလိမ်နည်း ၂ မျိုးပဲ ရှိပါတယ်… (၁) လူတွေရဲ့ လောဘကိုနင်းပြီး လိမ်နည်း နဲ့။(၂) လူတွေရဲ့ မေတ္တာ စေတနာ ကို နင်းပြီး လိမ်နည်း ပါ။
(၁) လူတွေရဲ့ လောဘကို နင်းပြီး လိမ်နည်း
အစုစပ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြမယ်ဟေ့ တစ်လကို ၁၀ တိုး ၊ ၂၀ တိုး ရမယ်.. အိုး…ထည့်လိုက်ကြတဲ့ ငွေတွေဆိုတာ နှစ်လ လောက်နဲ့ သိန်း ပေါင်း သောင်းချီတယ်.. ဟိုးအရင် .. နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်က ဧရာမြေ ကုမ္မဏီ TV မှာ ကြော်ငြာပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို လိမ်သွားတာကနေ ခု ချိန်ထိ လူတွေ မမှတ်သေးဘူး.. ဒီလို လူတွေရဲ့ လောဘကို နင်းပြီး လိမ်နည်းဟာ အလိမ်ခံရသူမှာ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများလို့ သူတစ်ဦးထဲသာ ထိခိုက် နစ်နာတယ်.. ကျန်တဲ့သူကို မထိခိုက်ဘူး..။
(၂) လူတွေရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာကို နင်းပြီး လိမ်နည်း
ဆူးလေဘုရားနားမှ ဖိနပ်ပြတ်သွားတဲ့ ကိုယ်တော် ခုချိန်ထိ ဖိနပ်အသစ် မဝယ်ရသေးဘူး.. ကားပေါ်မှာ စာရွက်လေးတွေ လိုက်ကမ်းနေတဲ့ ကလေးမလေး .. သူ့အသက်သာကြီးလာတယ်.. သူ့အမေရဲ့ ကိုယ်ရေပြားဝေဒနာ မပျောက်သေးဘူး.. ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ စပါးနှံ တောင်း ကြီးထမ်းပြီး ငှက်စာတွေ လိုက်ရောင်းနေတဲ့ စံပြဖခင် ဦးလေးကြီးကလည်း လူစည်တဲ့နေရာဆို သွေးတိုးပြီး အာဟာရပြတ် မူးလဲနေတာ ခုချိန်ထိ ဝေဒနာ မပျောက်သေးဘူး..။
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးမှာ နယ်ကိုပြန်ဖို့ လမ်းစရိတ်ကုန်သွားတဲ့ ကိုယ်တော် ခုချိန်ထိ သူပြန်လိုတဲ့နယ်ကို မရောက်သေးဘူး.. လူတွေရဲ့ မေတ္တာ စေတနာကို နင်းပြီး လိမ်နေလိုက်ကြတာ.. မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ သနားတဲ့စိတ် ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ်ကို နင်းပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လိမ်နည်းတွေ.. ဒီလို လိမ်နည်းက အလိမ်ခံရသူမှာ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုနည်းတယ်..ဒါပေမဲ့ ဒီလို လိမ်နည်းတွေကြောင့် လောကပါလ တရား ပျက်စီးပါတယ်.. ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံမို့ သင်္ကန်းဝတ်ပြီး လိမ်တဲ့အခါ သံဃာစစ် သံဃာမှန်တွေအပေါ် အင်မတန် နစ်နာတယ်.. ။
အမှန် ဒုက္ခကြုံရသူမှာလည်း သူတို့တွေကြောင့် အကူအညီရဖို့ ခက်သွားတယ်..ဥပမာ.. တကယ် နယ်ပြန်ဖို့ လမ်းစရိတ်ပြတ်သွားတဲ့ ရဟန်း တော်တစ်ပါး ၊ တကယ် ဖိနပ်ပြတ်သွားတဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါး ၊ ဈေးရောင်းရင်း တကယ်မူးလဲသွားတဲ့ သူ ၊ မိဘနှစ်ပါး တကယ်ရောဂါ ရနေ လို့ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ ကလေးငယ် ၊ အကူအညီရဖို့ ခက်ခဲသွားတယ်.. သူ့ကိုယ်မယုံ သူ့ကိုယ်မယုံ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဟာ မေတ္တာ စေတနာကို ခုတုံး လုပ်ပြီး လိမ်သူတွေကြောင့်ပါ.. သိပ်ဆိုးပါတယ်…။
ပွောရရငျ အခုဖျောပွမယျ့ လူလိမျ မြိုး နဲ့ ကိုယျကွုံလာရငျ ဖျောထုတျ ပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ.. ဒါပမေဲ့ ဖျောထုတျတဲ့ နရောမှာတော့ သတိ ကွီးကွီး ဉာဏျကွီး ကွီး ထားဖို့လိုပါတယျ.. (ကိုယျနာမညျကွီးဖို့ ၊ သူအရှကျကှဲစဖေို့ ဦးမတညျ သငျ့ပါဘူး..) မဟုတျရငျတော့ မတ်ေတာ စေ တနာကို မကျြစိစုံမှိတျပွီး ခံစားသကျဝငျတဲ့ ဒီနိုငျငံမှာ အမှနျတရားရဲ့ သူရဲကောငျးလုပျခငျြတဲ့ ခငျဗြားဟာ အားလုံးရဲ့အမွငျမယျ လူဆိုး တဈ ယောကျ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
တဈနကေ့ ဖွူးကို ကိစ်စလေး ရှိလို့ အမွနျလမျး ကနေ အသှား ဘုနျးဘုနျး တဈပါး နပေူကွီးထဲ လမျးဘေးမှာ ကားစောငျ့နတော တှလေို့ ကားရပျပေးလိုကျတယျ.. (ကားက ကြှနျတေျာ့အသငျးက Ambulance ကားပါ..)“ဘုနျးဘုနျး…ကားစောငျ့နတောလား..” ဆိုတော့ ကား ကို တဈခကျြ ကွညျ့ပွီး အိုးတို့ အနျးတမျးနဲ့ ဟုတျတယျတဲ့.. “ဘယျကွှ မလို့လဲ ဘုရား..” “ဒကာလေးက ဘယျသှားမှာလဲ..” “ဖွူး..ကိုသှားမလို့ ဘုရား..” “ဥူးဇငျးက တောငျငူကွှမှာ.. သှားသှား..ဒကာလေး..” “ရတယျဘုရား..တပညျ့တျောက ဖွူးမှာ ခဏရယျ..။
တောငျငူ ခကျြခွငျးသှားမှာ.. လိုကျခဲ့..” (အမှနျက တောငျငူသှားစရာအကွောငျးမရှိပါ.. တမငျ ပွောတာ..) “သှားပါ..ဒကာလေး.. ရတယျ.. ရတယျ. မလိုကျဘူး.. .” ဆိုပွီး အနားကနေ ခြာခနဲ ထှကျသှားတယျ.နထေိုငျရာ ဖဒိုမွို့က အမွနျလမျးဘေးမှာ ရှိနတောကတဈကွောငျး အမွနျလမျးကို ဖနျတဈရာတအေောငျ Ambulance အသုံးပွုရတာကတဈကွောငျး လမျးဘေးမှာ မကွာခဏကားတားစီးတဲ့ ရဟနျး သံဃာမြားနဲ့ ဆုံရတတျပါတယျ.. တှတေို့ငျး ကြှနျတျောလမျးကွုံ တငျတယျ.. ။
ရိုးရိုးသားသား လမျးကွုံလိုကျခငျြတဲ့ ရဟနျး သံဃာတှဆေို ခကျြခွငျးလိုကျပါတယျ.. သှားလိုတဲ့ မိုငျတိုငျကိုပွောပွီး ကားပျေါမှာ အေးခမျြး စှာ သီတငျးသုံး လိုကျလာတတျတယျ..ဆနျးဆနျးပွားပွား ကိုယျတျောတှဆေိုရငျတော့ ကြှနျတေျာ့ Ambulance ကို မစီးပါ.. သူတို့က အိမျ စီးကားမှ စီးပါတယျ.. ပွီးရငျတော့ ကားပျေါရောကျရငျ အလာပ သလာပ ပွောပါလိမျ့မယျ.. ကားမောငျးတဲ့သူက “အရှငျဘုရား ဘယျက ကွှ လာတာလဲ ” လို့ မေးတဲ့အခါ.. သာသနာအတှကျ အငျမတနျပငျပနျးဆငျးရဲကွီးစှာ အားထုတျနရေတဲ့။သူ့ဘဝအကွောငျးနဲ့ သူဆေးကုဖို့။
သို့မဟုတျ။သူ့ဝါး ဓနိ ကြောငျးလေး မိုးယိုနတော ပွုပွငျပေးမယျ့သူမရှိလို့ ရှာမှာရှိနတေဲ့ အမြိုးတှဆေီလာပွီး ငှလေေး ၅သောငျး လောကျ ခြေးငှါးတာ အဆငျမပွခေဲ့တဲ့အကွောငျး …. ဇာတျနာစှာ ပွနျပွောပွပါလိမျ့မယျ.. အဲဒီအခါ ကားမောငျးသူက သဒ်ဒါပေါကျပွီး လမျးကွုံဒါန အနနေဲ့ လှူပါလိမျ့မယျ.. (ကိုယျပိုငျကားစီးနိုငျသူလေ..) (လိုအပျနတေဲ့ ငှကေလညျး ၅သောငျး ထဲလေ..)အမွနျလမျးနားမှာနတေဲ့ ကြှနျ တျောတို့အတှကျ ဖနျတရာတေ ရိုးနတေဲ့ ဇာတျလမျးဖွဈပမေယျ့ လူတှေ ခုခြိနျထိ အလိမျခံနရေဆဲ.. တဈခါတဈလေ ။
အဲ့လို လှူလိုကျတဲ့အကွောငျး ဖဘှေ့တျ ပျေါမှာပုံလေးတှနေဲ့ တှရေ့တဲ့အခါ မခြိပွုံးပဲ ပွုံးမိတော့တယျ.. အဲဒီလို လူလိမျကိုယျတျောတှေ အ မွနျလမျးဘေးမှာ မြားလာတော့ တကယျ့ ကို ကားကွုံလိုကျခငျြတဲ့ ရဟနျးတျောတှအေတှကျ ခကျခဲသှားတယျ.. ဒီအကွောငျးသိတဲ့ ကား တှကေလညျး လူကွုံ မတငျရဲတော့ဘူး.. ဒီလို လိမျနညျးမြိုးကို “မတ်ေတာ စတေနာကို နငျးပွီး လိမျနညျး” လို့ ချေါပါတယျ..လောကမှာ လူ လိမျတှေ အသုံးပွုတဲ့ အခွခေံလိမျနညျး ၂ မြိုးပဲ ရှိပါတယျ… (၁) လူတှရေဲ့ လောဘကိုနငျးပွီး လိမျနညျး နဲ့။(၂) လူတှရေဲ့ မတ်ေတာ စတေနာ ကို နငျးပွီး လိမျနညျး ပါ။
(၁) လူတှရေဲ့ လောဘကို နငျးပွီး လိမျနညျး
အစုစပျလုပျငနျးတှလေုပျကွမယျဟေ့ တဈလကို ၁၀ တိုး ၊ ၂၀ တိုး ရမယျ.. အိုး…ထညျ့လိုကျကွတဲ့ ငှတှေဆေိုတာ နှဈလ လောကျနဲ့ သိနျး ပေါငျး သောငျးခြီတယျ.. ဟိုးအရငျ .. နှဈပေါငျး ၂၀ ကြျောက ဧရာမွေ ကုမ်မဏီ TV မှာ ကွျောငွာပွီး တဈနိုငျငံလုံးကို လိမျသှားတာကနေ ခု ခြိနျထိ လူတှေ မမှတျသေးဘူး.. ဒီလို လူတှရေဲ့ လောဘကို နငျးပွီး လိမျနညျးဟာ အလိမျခံရသူမှာ ငှကွေေးဆုံးရှုံးမှုမြားလို့ သူတဈဦးထဲသာ ထိခိုကျ နဈနာတယျ.. ကနျြတဲ့သူကို မထိခိုကျဘူး..။
(၂) လူတှရေဲ့ မတ်ေတာ၊ စတေနာကို နငျးပွီး လိမျနညျး
ဆူးလဘေုရားနားမှ ဖိနပျပွတျသှားတဲ့ ကိုယျတျော ခုခြိနျထိ ဖိနပျအသဈ မဝယျရသေးဘူး.. ကားပျေါမှာ စာရှကျလေးတှေ လိုကျကမျးနတေဲ့ ကလေးမလေး .. သူ့အသကျသာကွီးလာတယျ.. သူ့အမရေဲ့ ကိုယျရပွေားဝဒေနာ မပြောကျသေးဘူး.. ကလေးတဈဖကျနဲ့ စပါးနှံ တောငျး ကွီးထမျးပွီး ငှကျစာတှေ လိုကျရောငျးနတေဲ့ စံပွဖခငျ ဦးလေးကွီးကလညျး လူစညျတဲ့နရောဆို သှေးတိုးပွီး အာဟာရပွတျ မူးလဲနတော ခုခြိနျထိ ဝဒေနာ မပြောကျသေးဘူး..။
အောငျမင်ျဂလာ အဝေးပွေးမှာ နယျကိုပွနျဖို့ လမျးစရိတျကုနျသှားတဲ့ ကိုယျတျော ခုခြိနျထိ သူပွနျလိုတဲ့နယျကို မရောကျသေးဘူး.. လူတှရေဲ့ မတ်ေတာ စတေနာကို နငျးပွီး လိမျနလေိုကျကွတာ.. မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ သနားတဲ့စိတျ ကိုယျခငျြးစာတဲ့စိတျကို နငျးပွီး ထှကျပျေါလာတဲ့ လိမျနညျးတှေ.. ဒီလို လိမျနညျးက အလိမျခံရသူမှာ ငှကွေေးဆုံးရှုံးမှုနညျးတယျ..ဒါပမေဲ့ ဒီလို လိမျနညျးတှကွေောငျ့ လောကပါလ တရား ပကျြစီးပါတယျ.. ဗုဒ်ဓဘာသာ နိုငျငံမို့ သင်ျကနျးဝတျပွီး လိမျတဲ့အခါ သံဃာစဈ သံဃာမှနျတှအေပျေါ အငျမတနျ နဈနာတယျ.. ။
အမှနျ ဒုက်ခကွုံရသူမှာလညျး သူတို့တှကွေောငျ့ အကူအညီရဖို့ ခကျသှားတယျ..ဥပမာ.. တကယျ နယျပွနျဖို့ လမျးစရိတျပွတျသှားတဲ့ ရဟနျး တျောတဈပါး ၊ တကယျ ဖိနပျပွတျသှားတဲ့ ရဟနျးတျောတဈပါး ၊ ဈေးရောငျးရငျး တကယျမူးလဲသှားတဲ့ သူ ၊ မိဘနှဈပါး တကယျရောဂါ ရနေ လို့ အကူအညီလိုအပျနတေဲ့ ကလေးငယျ ၊ အကူအညီရဖို့ ခကျခဲသှားတယျ.. သူ့ကိုယျမယုံ သူ့ကိုယျမယုံ အခွအေနတှေေ ဖွဈပျေါလာတာ ဟာ မတ်ေတာ စတေနာကို ခုတုံး လုပျပွီး လိမျသူတှကွေောငျ့ပါ.. သိပျဆိုးပါတယျ…။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ
ကွာ သုံး ကွာ၊ ချာ သုံး ချာ၊ ပါ သုံး ပါ ဆို တဲ့ ဗဟု သုတ ရစရာ အကြောင်း လေးပါ….
ကိုလာ(၁)ဗူး က သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကို တစ်နာရီ အတွင်း အကျိုးများစွာ သက်ရောက်နို င်ပုံ အကြောင်း
ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးကျောက် တည်ရောဂါအတွက် ခွဲစိတ်ကုသစရာ မလိုပဲ အမြန်ပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်း